R & D ကုန်ပစ္စည်း Dept. - ရှန်ကျန်း KTC နည်းပညာ Group မှ
မူလစာမျက်နှာ / R & D Center က/ တီဗီ R & D Dept./ R & D ကုန်ပစ္စည်း Dept.
KTC ကုမ္ပဏီ၏ရှင်သန်မှုပစ်မှတ်အဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ကျူးလွန်နေသည်, ငါတို့စုံလင်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားရှိသည်, ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအီးယူ, မြောက်အမေရိက, တောင်အမေရိက, အာရှနှင့်အခြားတင်ပို့, ဖောက်သည်အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအသိအမှတ်ပြုမှုအနိုင်ရ နိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများ။
လက်မှတ်အဖွဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နိုင်ငံတကာတွင်အဆိုပါလက်မှတ်ရဖို့သေချာစေရန်, third-party အမြင်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်လက်မှတ်, ငါတို့ထုတ်ကုန်များ၏လက်မှတ်နှင့်ပတ်သက်သောအလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်, မြေတပြင်လုံးကုမ္ပဏီ R & D စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတောအတွင်းလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူဖောက်သည်ထုတ်ကုန်လက်မှတ်တောင်းဆိုချက်များကိုသေချာစေရန်, အတိုဆုံးအချိန်အတွက်စျေးကွက်ဝယ်လိုအားအရသိရသည်ဖောက်သည်မှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အစီရင်ခံစာများနှင့်လက်မှတ်များပေး, အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်။
အောက်ပါဇယားကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်သည်နှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုပြသထားတယ်။ ဖောက်သည်များကသူတို့အခြေအနေများအပေါ် မူတည်. လက်မှတ်လိုအပ်ချက်များကိုအဆိုတင်သွင်းဖို့ကြိုဆိုကြသည်, ထိုလက်မှတ်အဖွဲ့သင်သည်အမှုဆောငျဖို့ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။